Moto C: အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စျေးနှုန်းပေါက်ကြား | Androidsis
Moto C သတ်မှတ်ချက်များ
Motorola မှာကောင်းမွန်သောတစ်နှစ်ရှိသည့်နောက်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်စျေးကွက်တွင်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောကိရိယာများကိုစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဒါ့အပြင်လောင်းရန်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက် Android ဖုန်းများ အထူးသဖြင့်အသစ်ပြောင်းခြင်းများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်သန့်ရှင်းသည်သင်၏မျက်နှာသာပေးသောအရာဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီသည်ဆိုက်ရောက်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည် အကွာအဝေးကို C.
သူတို့ခေတ်ကသူတို့ကအဲဒါဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ် အနိမ့်စျေးနှုန်းများနှင့်ကောင်းသောသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အတူမျိုးဆက်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီဖုန်းရဲ့ပထမဆုံးဖုန်းကိုငါတို့သိပြီးသားပါ။ အကြောင်း Moto C။ ဖုန်း၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်။ Motorola မှမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် အများဆုံးပြည့်စုံခြင်းနှင့်အရည်ပျော်ပစ္စည်း၏ဖုန်း။ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းအားအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည် စျေးနှုန်းလျှော့ချ။ စံပြပေါင်းစပ်မှုနှင့်အမှတ်တံဆိပ်အများစုအောင်မြင်လိုသောတစ်ခု။ ဒီပစ္စည်းနဲ့ Motorola အောင်မြင်ခဲ့တယ်။ ဒီ Moto C မှဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်ပါသလဲ။
ဖုန်းမှာ ၆.၅ လက်မမျက်နှာပြင် resolution နှင့်အတူ5x 854 pixels ရှိသည်။ ဖုန်း၏ကိုယ်ထည်ကို polycarbonate ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကျောဘက်တွင် micro-textures ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ အတွင်းပိုင်း၌ဖုန်းတွင်ပါလိမ့်မည် MediaTek MT6737M 4-core ပရိုဆက်ဆာ။ တစ် ဦး ရှိခြင်းအပြင် Mali-T720 GPU ကို.
ဒီ Moto C ရှိ RAM သည်စိတ်ပျက်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဖုန်းရှိပါတယ်ကတည်းက RAM ကို 1 GB အထိ။ သိုလှောင်မှုပမာဏအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူကွဲနှစ်မျိုးကိုတွေ့ရှိနိုင်သည် 8 နှင့် 16 GB ကို။ နှစ် ဦး စလုံးမှတက်ချဲ့နိုင် microSD ကနေတဆင့် 32 GB။ ဓာတ်ပုံအပိုင်းမှာတော့သိပ်ကိုထူးခြားတာမဟုတ်ဘူး။ The နောက်ကင်မရာ ကဖြစ်ပါတယ်5အမတ် ရှေ့ကင်မရာနေစဉ်2အမတ်.
La ဒီ Moto C ရဲ့ဘက်ထရီက ၂,၃၅၀ mAh ပါထို့ကြောင့်၎င်း၏သတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ခြင်းသည် device ကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန်လုံလောက်သည်။ ဒီပစ္စည်းကိုဈေးကွက်ထဲမှာဖြန့်ချိမှာပါ အရောင်လေးခု (အဖြူ၊ ရွှေ၊ အနက်နှင့်အနီရောင်) ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သူကရှိပြီးသား operating system တစ်ခုအဖြစ် Android 7.0 ။ နူဂါး.
ထို့အပြင်ဖုန်း၏စျေးနှုန်းကိုဖော်ပြပေးထားသည်။ အကယ်၍ ဒီ Moto C ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကသင့်ကိုအံ့အားသင့်စေပါက၎င်းရဲ့စျေးနှုန်းလည်းပါလိမ့်မယ်။ ဒီပစ္စည်းက ၇၉ ယူရိုလောက်ဈေးနဲ့ရောင်းမှာပါ. ဒီ Motorola ဖုန်းကိုဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Motorola က » Moto C သတ်မှတ်ချက်များ
ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသည့်အခါ Google Pixel XL2တွင်အသံပြproblemsနာများရှိသည်